Giiftii dureen Yunaaytid Isteetes Melaniyaa Traamp daw’annaa Afrikaa keessatti gaggeessatti jalqabaniin har’ai Gaanaa seenanii jiru.Abbaan warraa isaanii Prezidaant Donaald Traamp eega aangoo qabatanaii as Melaniyaan qophaa isaanii imalaaf gara biyya alaatti ennaa deeman kun ka jalqabaa ti.
Wiixata har’a ganama Gaanaa erga seenanii booda Hospitaala sadarkaa kutaa ka ta’e Akraa keessatti daw’achuun daa’imman ulfiinni qaama isaanii ilaalamaa fi uffanni qorraa akkasumas meeshaalee daa’iima ittiin xabachhisan kan Waayit Hawuus ergeef ennaa kennamuuf ilaalaa turan.
Sana booda gara masaraa prezidaantummaa biyyattii deemuun giiftii duree Gaanaa Rebekaa Akufo-Addoo waliin qophaa isaanii shayee dhugan.
Daw’annaa kanaaf Melaniyaan gara Maalaawwii, Keniyaa fi Masriitti kan goran ta’u kan ibse waayit Haawuus qiyyaafanni duraas dubartoota ulfaa, kunuunsa daa’imman haaraa dhalataniif godhamu akkasumas ijoolleen barnoota akka argatan gochuu irratti akka ta’e ibsee jira.
Kana malees aadaa fi seenaa biyyoota Afrikaa keessaa fi deggersa Amerikaan gootu irratti fulleeffata.